Vaovao Mafana · Jolay, 2008 · Global Voices teny Malagasy
Vaovao Mafana · Jolay, 2008
Jolay 2022 1 Lahatsoratra
Avrily 2022 1 Lahatsoratra
Febroary 2022 3 Lahatsoratra
Tantara mikasika ny Vaovao Mafana tamin'ny Jolay, 2008
India: Ireo fipoahana baomba erak'i Bangalore
India 26 Jolay 2008
Bangalore, renivohitry ny fanjakana ao Karnataka, dia lasibatry ny fampihorohoroana tamin’ny alàlan’ny baomba ora vitsy lasa izay. Ny vaovao ampela-tànana dia manambara fipoahana baomba fito tamin’ny faritra samihafa tao an-toerana, tanatin’ny elanelam-potoana roambinifolo minitra. Tsy dia nahery vaika loatra ireo baomba ary irony karazana zelatina (gélatine en baton) irony no...
Egypta: Mirodana ireo tranobe
Ejipta 17 Jolay 2008
Zava-mahazatra eto Egypta ny lohateny vaventin’ireo gazety milaza fikorotsahana tranobe , ary koa ireo vatana mangatsiakan’ankizy sintonina avy any ambanin’ireny korontan-javatra ireny. Ibn Al Dunya, [anglisy], ao amin’ny blaogy Fustat, dia mitatitra ny zava-doza farany hatreto, izay namoizana ain’olona tsy manatsiny dimy. Hoy ny mpitoraka blaogy manazava [anglisy]: Tranobe iray...
Shina : Andao hanao paompy e ! (ala vokona)
Shina 12 Jolay 2008
Mba fantatrareo moa hoe nahoana no lasa mankafy manao paompy –ala vonkona – aok’izany ny Shinoa anarivoarivony ? Ary tsy mahazo mihoatra ny intelo anefa? Tsy misy resaka lalao olaimpika. Misy ambadika politika ao no antony tokana mahatonga izany.
Japàna : Fanambarana mikasika ireo olona nalaina an-keriny izay miteraka fahatezerana
Japana 09 Jolay 2008
Ny fanambarana nataon'i Koichi Kato, mambran'ny Antoko Liberaly Demôkratika Japôney [Liberal Democratic Party] sady ministra teo aloha rahateo, tamin'ny 7 Jolay 2008 lasa teo dia niteraka fahatezerana teo anivon'ireo mpiblaogy Japoney sy tao amin'ny vohikala 2channel [Japôney]. Ny tsy fandrosoan'ny adihevitra fikatsahana fihavanana amin'ny Japàna sy Kôrea Avaratra dia narohin'i Koichi Kato tamin'ny...
Vovonàna GV : Tanteraka koa ny andro faharoa !
Hongria 01 Jolay 2008
Raha nifantoka amin'ny fisoloam-bava sy fivoizana hoan'ny fahafaham-pitenena'ireo mpiblaogy ny Andro voalohan’ny vovonàna Global Voices, androany kosa dia mifantoka bebe kokoa amin'ny raharaha anatin'ny Global Voices, miaraka amin'ny fampahalalana ireo tetikasa hafa miara-dia aminy dia ny Rising Voices [Fanandratana ny feon'ireo izay tsy re] sy Lingua [dikateny GV, tafiditra ao ny Malagasy amin'ny alalan'ity...